Qarax Geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Waddada Maka Al-Mukarrama. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Qarax Geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Waddada Maka Al-Mukarrama.
Qarax Geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Waddada Maka Al-Mukarrama.
Qaraxan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ku qarxay agagaarka Hotel-Wehliye ee Wadada Maka Al-mukarrama.
Qaraxa oo dhacay xilli galab ah oo ay waddooyinku saxmad ahaayeen, goobo ganacsi oo ayaa ku yaallo hareeraha wadada ay mashaqadan ka dhacdey, dad rayid ah ayaa ku dhintay kuwa kale waa eey ku dhaawacmeen.
Goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa ka muuqdey burbur baahsan, gaadiid badan oo wadada isticmaalayey ayaa iyane saameyn kala duwan ka soo gaartay qaraxa.
Kooxaha gurmadka degdegga oo soo gaaray goobta ayaa waxa ay daad gureyeen dadkii ku waxyeeloobey Qaraxa kadib markii ay halkaas ay soo gaareen ciidammada ammaanka Soomaaliya.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha C/casiis Cali Ibraahim (Xildhibaan) ayaa sharraxay khasaaraha, waxa uu sheegay in 14 ay dhimatay, halka 15 kalena oo dhaawacyo ah loo qaaday isbitaallada Muqdisho, waxa uu carrabka ku dhuftay in kooxaha argagixisadu ay doonayaan in ay geystaan khasaare intaan ka badan, Afhayeenka ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidammada amniga oo wada dadaallo xooggan, si looga hortago dhagarta cadowga ay umaaleegayaan ummadda Soomaaliyeed.
Ciidamada ammaanka ayaa iyana dadaal xoogan ugu jiro sidii looga hor-tegi lahaa qataraha kooxda nabad-diidka ah ee Al-shabaab, waxana dhawaanahaan jiray in ciidama xoogga dalka Soomaaliyeed ee culeys ku saaraan goobaha ay kaga dhuumaaleysanayaan goballada dalka.
Previous articleWasiirka arrimaha gudaha XFS oo furay shirka Madasha hanaanka Qaran ee Dowladdaha hoose “Sawirro”
Next articleQarax Geystay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Waddada Maka Al-Mukarrama. ( Daawo Sawirro )